Sense 3.0 - Magic Locker အဓိကအကြောင်းအရာ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sense သည် 3.0 - မှော် Locker Theme
'HTC sense3 - Magic Locker Theme' သည် Magic Locker အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်ပုဒ်အက်ပ်ကိုဖွင့်ရန်သင်သည် Magic Locker App ကိုအရင်တပ်ရမည်။
- ရွေးချယ်မှုအတွက် ၂ စတိုင်ဂီတထိန်းချုပ်မှု
- စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောဖြတ်လမ်းလေးခုကိုထောက်ပံ့ပါ။ (Defaults များသည် Phone / SMS / Camera / Browser /
- အသံတိတ် mode ကို toggle
- နောက်ခံပုံ ၂ ခု
အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ခွင့်ပြုချက် - AD ပြသရန်။ (Free Themes နှင့် AD အတွက်သာလျှင် Themes Apply and Themes Customization တွင်ပြသလိမ့်မည်)
ကျွန်ုပ်တို့ app ကိုနှစ်သက်ပါကကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပါ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ သင်သည်အမှားအယွင်းများနှင့်ကြုံတွေ့ရလျှင်သို့မဟုတ်တိုးတက်မှုရှိလိုပါက lockscreen.mobi@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။
မေး: ပိုပြီးမှော် Locker Themes ကိုရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ?
A: MagicLocker Setting -> Themes Tab တွင် 'More Themes' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် Google Market တွင် 'mobi.lockscreen.magiclocker.theme' ကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေပါ။
မေး: ကို Magic Locker Themes ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
A: MagicLocker themes အက်ပ်ကိုသင်တပ်ဆင်ပြီးလျှင် theme app ကိုဖွင့ ်၍ `ဤအခင်းအကျင်းကို Install 'ခလုတ်ကိုဒိုင်ယာလော့ခ်တွင်နှိပ်ပါ။
မေး: ကို Magic Locker Themes uninstall လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
A: 'MagicLocker Setting -> Themes Tab' တွင်ရှည်လျားသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုသင်ကြာမြင့်စွာနှိပ်ပြီး 'Uninstall theme' ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် 'System Setting -> Applications -> Applications ကိုစီမံပါ' သို့သွားပြီး၊ အထဲမှာ App ကိုယေဘုယျအက်ပ်အဖြစ် uninstall လုပ်ပါ။
Q: 'Lost Robot' အခင်းအကျင်းကို MagicLocker မှအဘယ်ကြောင့်ဖယ်ထုတ်။ မရပါသနည်း။
A: 'Lost Robot' သည် Magic Locker မှမူလဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးအဓိက Locker သည်အနည်းဆုံးတစ်ခုရှိရန်သေချာစေရမည်။
Q: MagicLocker Setting -> Themes Tab မှခေါင်းစဉ်တစ်ခုဘာကြောင့်ပျောက်သွားတာလဲ။
ဖြေပထမဦးစွာဟုတ်ကဲ့လျှင်, ဆောင်ပုဒ် app ကို reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ, သင့် SD ကဒ်ရရှိနိုင်ပါသည်သေချာပါ။
Password ကို ...
အစာရှောင်ခြင်း Locker: ...